China Taper Roller Kubereka Metric akateedzana vagadziri uye vanotengesa | LGGB
Yakadzika paburi bhora inotakura 6000 akateedzana
Yakadzika paburi bhora inotakura 6200 yakateedzana
Yakadzika paburi bhora inotakura 6300 dzakateedzana
Yakadzika paburi bhora inotakura 16000 dzakateedzana
Taper Roller Kubereka Metric akateedzana
Taper Roller Kubereka Inch akateedzana
Kubereka Dzimba UC akateedzana
Kubereka Housings SA akateedzana
Taper roller inotakura inowanzo shandiswa kutsigira mutoro wakasanganiswa kunyanya uine radial mutoro. Makapu avo akaparadzaniswa kuitira nyore kusangana. Munguva yekumisikidza uye kushandisa, radial clearance uye axial clearance inogona kugadziridzwa uye kutakurwa kutakurwa kunogona kugadzirwa.
Taper roller inotakura yakasarudzika yakasarudzika kubata zvese zvinokanda uye zvine radial mitoro pane inotenderera miseve uye mudzimba.
Taper roller inotakura yakagadzirirwa kutakura zvese zvinorehwa uye zvakasara zvinorema uye zvine zvinhu zvina: koni, kana mhete yemukati; mukombe, kana mhete yekunze; iyo tapered roller, kana zvinhu zvinoumburuka; uye keji, kana roller roller.
Taper roller inotakura inonyanya kutakura radial, axial yakasanganiswa mutoro neiyo radial mutoro mune huru. Iko kugona kweaxial mutoro kutakura kunoenderana nekona yekubatana yeiyo yekunze mhete nzira. Iyo yakakura iyo yekubata kona ndeye, iyo yakakura iyo kugona ichave iri.
Taper roller inotakura kona pakati pekunze nzira yemagetsi generatrix uye mutsetse, iyo inotakura inogona kutakura inorema mutoro uye imwe Tappered Roller Mabheyaringi, inowanzo iine majoini mutoro zvinoenderana nenzira imwe axial mutoro, asi kwete chete radial mutoro.
Taper roller mabheyaringi ane tapered yemukati neyekunze mhete nzira, Iyo tapered roller iri pakati penzira mbiri idzi. Iyi mhando yemabheyari inowanzo kupatsanurwa, kureva iyo yekuchengetedza, yemukati mhete uye yekunze mhete inogona kuiswa yakaparadzaniswa. Ivo vanogona kumira yakanyanya radial mirayiridzo mutoro uye imwe axial mutoro. Izvo zvakagadzirwa mumhando dzakasiyana uye masitayera kusangana nemhando dzese dzemabasa.
d D T B C rmin r1min Cr VaK r / min r / min
Pashure: Taper Roller Kubereka Inch akateedzana
Zvadaro: Yakadzika paburi bhora inotakura 16000 dzakateedzana